कुलेन्द्र बिश्वकर्माले दिए प्रकाश सपुतलाई झड्का ! हिट हुनुभन्दा पहिला म कामी हुँ म दमाई हुँ भन्न सक्नुपर्छ>>हेर्नुहोस् भिडियो – सुदूरखबर डटकम
कुलेन्द्र बिश्वकर्माले दिए प्रकाश सपुतलाई झड्का ! हिट हुनुभन्दा पहिला म कामी हुँ म दमाई हुँ भन्न सक्नुपर्छ>>हेर्नुहोस् भिडियो
पुख्र्यौली पेसा सुन बनाउने भएपनि आफुले नामको पछाडि सुनार नलेखि कामी लेखेको बताउँदै, अरुलाई पनि गर्भका साथ आफ्नो जात लेख्न अनुरोध गरेका छन् । बोल्दा बोल्दै उनले प्रकाश सपूतको नाम लिएर सपूत कपूत लेखेर अगाडि नबढौ भनेर कटाक्ष समेत गर्न भ्याए । विश्वकर्मा सुनचाँदी व्यवसायी सञ्जालको कार्यक्रममा कुलेन्द्र विश्वकर्मा लगायत युवा तथा खेलकुद मन्त्री जगत विश्वकर्मा , अर्जुन रसाइली , गायक प्रकाश सपूत , रवि ओड अतिथि बनेर पुगेका थिए । >>हेर्नुहोस् भिडियो सहित